အနုပညာ – Burmese Online News
သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေနဲ့ လင်းလင်းတို့ရဲ့ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေ ကိုဗစ် ၁၉ ကာလ ဆွမ်းခက်ခဲနေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း ၂၄ ကျောင်းကို နေ့ဆွမ်းပို့ကာကပ်လှူခဲ့တယ်လို့ ချစ်သုဝေက အသိပေးထားပါတယ်။ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကတော့ ကိုဗစ် ၁၉ စတင်ဖြစ်စဉ်ကတည်းက ကျန်းမာရေး၊ စားသောက်ရေး အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ နေရာတွေကို လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ကူညီပေးနေတာ အားလုံး အသိပဲဖြစ်မှာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၂၄ ကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ သံဃာတော်အပါး၂၀၈ ပါးအတွက် နေ့ဆွမ်းတွေကို လိုက်လံ ကပ်လှူနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်သုဝေ ကမျှဝေ ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ “COVID-19 ကာလမှာ ဆွမ်းလောင်းအသင်းများရပ်နားထားသလို ဆွမ်းခံထွက်ခြင်း များမပြုလုပ်ကြတဲ့ သံဃာတော်များ အတွက် ဆွမ်းအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲအတွက် ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ (၇) က်သားသမီးများနှင့် စုပေါင်း၍ ဒဂုံမြို့နယ်၊ အိမ်တော်ရာတိုက်၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၂၄) ကျောင်းရှိ သံဃာတော်...
နေတိုးကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းက ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ ဒေသတွေ အတွက် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းစက် တစ်လုံး လှူဒါန်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီနေတိုး ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက မြို့နယ်တွေအတွက် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းစက် တစ်လုံး လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် အသျှင်ကုမာရက ပြောပြလာပါတယ်။ ” ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ နေတိုး မိသားစုတို့က ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့၊ မြောက်ဦးမြို့၊ မင်းပြားမြို့များတွင် အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းတဲ့ စက်တစ်လုံးကို ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့ တာမွေမြို့နယ် အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက် အသျှင်ကုမာရ ထံသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ အလိုတော်ပြည့်ပါစေ” ဆိုပြီးတော့ အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော် အသျှင်ကုမာရ ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်မှာ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၁) နာရီကျော်က...
အဆိုတော် ယုန်လေးကတော့ လူရွှင်တော် ဧရာနဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် ကျော်ထူးတို့ဆီက ဆန်နဲ့ ထီလက်မှတ်တွေ ဝယ်ထားတာလို့ သိရပါတယ်။ အဆိုတော် ယုန်လေးကတော့ လူရွှင်တော် ဧရာဆီက ထီလက်မှတ်တွေ၊ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် ကျော်ထူးဆီက ဆန်တွေ ဝယ်ပြီး ပရိသတ်အယောက်(၅၀၀) ကို လှူဒါန်းသွားမယ့်အကြောင်း ပြောပြလာပါတယ်။” 28 ၊ 29 ရက်နေ့ အလှူ အတွက် ကိုဧရာ ဆီက လူအယောက် (၅၀၀)စာ တစ်ယောက် (၃ စောင်) နှုန်းနဲ့ ထီလက်မှတ် အစောင်ရေ (၁၅၀၀) ၊ ကိုကျော်ထူး ဆီက ဆန် (၃ပြည်)အိတ်၊ လူအယောက် (၅၀၀ )စာ အိတ် (၅၀၀) အားပေးခဲ့ပါပြီ။ ကျန်တာတွေ ထပ်စီစဉ်နေပါသေးတယ်။ အလှူရှင် ထပ်တိုးရင် အရေတွက် ထပ်တိုးပါမယ်။ ထီတွေပေါက်ရင်တော့ အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းသွားပြီ။ ထီတွေ...
အေသင်ချိုဆွေကတော့ ဒီနေ့ ( သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်)မှာ ကျရောက်တဲ့ သမီးလေးIvyရဲ့ အသက်(၃) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ သူ့ရင်ထဲက လာတဲ့စကားလေးတွေနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အေသင်ချိုဆွေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) နှစ်က Ivy လေးကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေ ပြန်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ ရင်သွေးလေးကို တွေ့ခွင့်ရတော့မယ့် မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ အရမ်းကို ပျော်နေခဲ့တာလို့ သူက ဆိုပါတယ်။ ” Happy Birthday mommy’s ivy lay။ မြန်မာလိုဆို မေမေ့ နွယ်ပင်လေးပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) နှစ်က ဒီလို နေ့မျိုး ဒီအချိန်လောက်ဆို မေမေ ခွဲခန်းထဲဝင်ဖို့ ready ဖြစ်နေပြီ။ မေမေ့ဘေးနားမှာ ဘွားဘွားရယ်၊ ခွားခွာရယ်၊ မေမေမသိတဲ့ Nurse တွေရယ် ပဲရှိပေမယ့် မေမေ တစက်လေးမှ မကြောက်မိပါဘူးကွယ်။မေမေ့...
ထူးခြားတဲ့ အနုပညာစွမ်းရည်ကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ရွှေမှုံရတီက ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုတွေများစွာကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရွှေမှုံရတီက အစစအရာရာ ပြည့်စုံသူတစ်ယောက်လို့ ပရိသတ်တွေထင်ကြပေမယ့် သူမရဲ့ မွေးရာပါနှလုံးရောဂါကြောင့် စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေလည်း ရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီက အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်း စိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်ရရှိခဲ့တာကြောင့် အရင်ကထက် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မနေ့က သြဂုတ်လ (၂၄) ရက်နေ့မှာတော့ ရွှေမှုံရတီက ရုတ်တရက် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ဆေးရုံတက်ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီကတော့ ဆေးထိုးအပ်ရာတွေများစွာနဲ့ ဆေးရုံပေါ်မှာ လှဲလျောင်းနေရတဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးကို ဖေ့စ်ဘုတ် My Day ကနေ မျှဝေထားပြီး ဘာရောဂါအခြေအနေကြောင့် ဆေးရုံတက်ရတယ်ဆိုတာကိုတော့ ပြောမပြထားပါဘူး။ ရွှေမှုံရတီကတော့ အိမ်ထောင်မကျခင်အချိန်တုန်းက ထိုင်းနိုင်ငံ၊...
မြန်မာအိုင်ဒေါ Season-4 ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Winner ဆုရှင် အက်စတာကတော့ မကြာသေးခင်ကမှ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးသီချင်းလေးကို ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သေချာအချိန်ယူပြင်ဆင်ပြီးထွက်လာတဲ့ သီချင်းလေးမို့ စောင့်မျှော်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေ မျှော်ရကျိုးနပ်စေခဲ့မှာ အမှန်ပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ဒီသီချင်းလေးကို ကြည့်ရှုသူ တစ်သန်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အက်စတာကတော့ ” ကော်ဖီပူပူလေးသောက်ရင်း Unseen သွားတဲ့တစ်ယောက်သောသူကိုစောင့်နေမိတယ်…. ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး 1M လေးပြည့်သွားတော့ပျော်လို့ပါ…. ချစ်ပီးအားပေးကြတဲ့ White Nubes တို့နဲ့ အမျိုးတို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်…. ပိုကြိုးစားပါ့မယ်ရှင့်” ဆိုပြီး ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်လို လူမှုကွန်ရက်ကိုပဲ အသုံးပြုပြီး အချင်းချင်းဆက်သွယ်လာကြတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Message ကို ချစ်ရသူက မကြည့်တော့တဲ့အနေအထားလေးမှာ ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေကို ဒီသီချင်းလေးထဲမှာ တွေ့မြင်ရမှာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ… အက်စတာရဲ့ သီချင်းအသစ်လေးကို နားမထောင်ရသေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source – Esther DCS
(၂၀၁၉) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလောက်ကတည်းက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကတော့ အခုဆိုရင် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာ တစ်နှစ်နီးပါးရှိနေပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အခြားနိုင်ငံတွေလောက် ရောဂါပိုးကူးစက်ပျံ့နှံမှုမများခဲ့ပေမယ့်လည်း လတ်တလောမှာတော့ ဒုတိယလှိုင်းပြန်လည်စတင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတွေ့ကြောင့် အစစအရာရာလည်ပတ်နေပြီလို့ ထင်ထားကြတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်တွေလည်း ပြန်လည်စတင်လာပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ ပထမတစ်ခါ အလုပ်တွေအကုန်ရပ်သွားချိန်မှာတောင် စားဝတ်နေရေးထိခိုက်ကြကုန်တဲ့သူတွေ အများကြီးမို့ ဒီတစ်ခေါက်သာ ထပ်ပြီး ရပ်ခဲ့ရင် ပိုဆိုးကုန်မှာ အမှန်ပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ… ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်ဂျွန်လွင်တစ်ယောက်လည်း ပြန်လည်စတင်လာတဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် အိပ်မပျော်နိုင်ဖြစ်နေပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ” covid19 ရယ်ထွက်သွားပါတော့…. မနက် 4.30 am ထဲက ငါပြန်အိပ်မပျော်တာ ငါအတွက်ထက် ငါဝန်ထမ်းတွေရယ်….. ငါတို့မြန်မာနိင်ငံရဲ့ အခြေခံပြည်သူတွေအတွက်စားဝတ်နေရေးစိတ်ပူလိုက်တာ” ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ… အခုလိုအချိန်ကတော့ အားလုံးစိတ်ပူနေရတဲ့အချိန်မို့ ရောဂါပိုးဆက်လက်မပြန့်ပွားအောင် ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။ Source...
ဟာသသရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေးသေဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ သားကြီး (ခ) သန်းထွဋ်အောင်၊ အောင်လေးနဲ့ ကျော်ဇော်ဟန်တို့ကို အာမခံရုပ်သိမ်းပြီး အရင်မူလ ပုဒ်မအတိုင်း ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက သိရပါတယ်။ ဒီအမှုကို တိုင်းတရားလွှတ်တော်ကနေ အာမခံ ရရှိနိုင်တဲ့ ပုဒ်မ ၃၂၅ အပြင်းအထန် ထိခိုက် နာကျင်စေမှုနဲ့ ပြန်လည် ပြောင်းလဲစွဲဆိုခဲ့ပြီးနောက် သားကြီး (ခ) သန်းထွဋ်အောင်၊ အောင်လေးနဲ့ ကျော်ဇော်ဟန်တို့ သုံးဦးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှာ တစ်ဦးကို သိန်း ၂၀၀ နဲ့ အာမခံပေးခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေ ဒီအမှုကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ကို ပြင်ဆင်ချက်ပြန်ပို့ခဲ့တဲ့ အတွက် ဒီအမှုကို အရင်မူလစွဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ်မ ၃၀၂ လူသေစေမှုအဖြစ် ပြန်လည်တရားစွဲဆို ခဲ့တာပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဩဂုတ်လ ၁၈...
အားလုံးသိကြတဲ့ မင်းသမီး ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ ဒီကနေ့မှာပဲ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒီဇိုင်နာ မျိုးမင်းစိုးက သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကနေ ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကြော်ငြာမင်းသမီးဆိုတဲ့ ခေတ်တစ်ခေတ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးဟာ အသက်တွေကြီးလာခဲ့ပေမယ့် သူချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေခဲ့သူပါ။ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဘေးနားမှာ ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်တွေလည်း တွေ့ကြဖူးမှာပါ။ ဒီကနေ့မှာတော့ သူမရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဆုံးပါးသွားခဲ့လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြောင်းကို ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးက သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်မှာယခုလိုပဲဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ “ထက်ထက်ရဲ့ဖခင်ကွယ်လွန်သွားလို့ထပ်တူဝမ်းနည်ကြေကွဲရပါတယ်။ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။” လို့ စိတ်မကောင်းစွာရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁၁ ရက်က သွေးတိုးကာ လေဖြတ်သွားသောကြောင့် မန္တလေးမင်္ဂလာဆေးရုံတွင် အရေးပေါ်ကုသခဲ့ရပြီးနောက် ဆေးရုံတွင် တောက်လျှောက်ကုသမှုခံယူရင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ဖခင်ကို တန်ဖိုးထားစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ ထက်ထက်ရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုဟာ ဘာနဲ့မှ အစားထိုးမရနိုင်ဘူးဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးလည်း ခံစားမိကြမှာပါနော်။ ထက်ထက်ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း သူမရဲ့ဖခင်ကောင်းရာမွန်ရာဘဝကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦး။